Salad avokado ah oo lebis malab ah | Xeerarka ThermoRecipes
Salad avokado ah oo lebisan Malabka Malab
EnsaladasDaqiiqado 6Dadka 4Kalooriyeyaasha 75
by Irene Arcas
Maanta waxaan kuu soo qaadaneynaa salad aad u fiican oo cusub maalmaha kulul. Iyo, waxa ugu fiican ayaa ah inay fududahay: salad avokado leh malab iyo liin vinaigrette. Maxaan dhigeynaa saladheena? Hagaag, waxa aan ugu jecel nahay, waxa aan dooneyno, waxaan gacanta ku heyno, waxa aan door bidno, waa wax fudud!
Waxaan kuu sheegi lahaa inay jiraan laba waxyaalood oo muhiim ah oo aan ku iftiimin doono qormadan: the avocado iyo arugula. Waa laba walxood oo si caadi ah u guursada liin dhanaanta Laakiin ma lihin? Gabi ahaanba waxba ma dhacaan !! Waxay ku saabsan tahay isticmaalka maaddooyinka aad ku haysato guriga ama aad ugu jeceshahay.
Marar badan ayaan caadeysanay inaan saladhideena ugu labisano saliid iyo khal ... laakiin ma isku dayday inaad ku badasho khalka liin? Waa wax lagu farxo, waad arki doontaa! Iyo taabashada ah malabMmmm Mmmmm aan laga gudbi karin.
1 Salad avokado ah oo lebisan Malabka Malab
1.1 Waxyaabaha ay ka kooban tahay
Fadlan soo gal si aad u keydiso
Salad Avocado leh malab iyo liin dhanaan, oo aan la dhaafi karin oo fudud oo macaan.
Qolka jikada: casri ah
Nooca cuntada: salad
Waqtiga diyaarinta: 1M
Waqtiga karinta: 5M
Wadarta waqtiga: 6M
Labiska Malabka Malabka
1/2 liin aan lahayn lafo ama maqaar (ama qayb cad)
100 g oo saliid saytuun ah oo bikro ah oo siyaado ah
1/4 qaado oo milix ah
Malab qaado oo milix ah
1 kiish oo arugula ah iyo saladhka wanka (nooc kasta oo saladh ama caleemaha cagaaran ah ayaa sameyn doona)
1 nooc yaanyo waaweyn oo buluug ah, saladh, ubax, raff (yaanyo tayo fiican leh)
1/4 ee chives ee julienne
1 qajaar la jarjaray oo la jarjaray maqaarka qayb ahaan
Dhammaan walxaha dharka lagu xidho dhalada ayaan ku shubnay oo waan emulsify 20 ilbiriqsi, xawaare 4.
Waxaan ku dhajinay dhamaan walxaha saladhkeena si fiican loo dhigay oo aad u qurux badan saxan weyn waxaana ku darnaa labiska aan diyaarinay malabka iyo liinta dusheeda. Si aad ugu raaxaysato !!
Soo ogow cuntooyinka kale: Cunto caafimaad leh, Saladyada iyo Khudaarta, Si fudud, Wax ka yar 15 daqiiqo, Khudaarta
Wadada buuxda ee maqaalka: Heerkulbeegyada » Cunnooyinka Thermomix » Saladyada iyo Khudaarta » Salad avokado ah oo lebisan Malabka Malab
Bariis saytuun ah
Bariis leh zucchini iyo reexaanta